နေမျိုးကြီး ကဗျာတွေ ဖတ်မလား | ဟန်ဆန်း
ဟန်ဇော် / March 28, 2017
နေမျိုးကြီး ကဗျာတွေ ဖတ်မလား ဆိုသော စာသားအစုအဖွဲ့သည် ကဗျာဆရာနေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော လူဖြစ်ရတာ ကောင်းတယ် ကဗျာအတွင်းမှ ဖြစ်ပါသည်။ နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်ကို နှစ်ကာလများစာပေက ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ၁၉၉၀-၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ စာပေဝါသနာပါသူ လူငယ်တွေအတွက် နေမျိုးရဲ့ ရေးဟန်တွေဟာ ဆန်းသစ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့။ တစ်လ၊ တစ်လ မဂ္ဂဇင်းမှာ နေမျိုးရဲ့ ဝတ္ထုပါလေမလား၊ ကဗျာပါလေမလားဆိုပြီး စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အနေအထားတစ်ခု ဟု နှစ်ကာလများစာပေ၏ ထုတ်ဝေသူလည်းဖြစ်၊ ကဗျာဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်သော မိုးဝေးက နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်တွင် မှတ်ချက်ပြု ထားခဲ့သည်။ စာအုပ်တွင် နေမျိုး၏ ကဗျာလက်ရာ ၅၈ ပုဒ်ကို ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ဟု စာအုပ်အမည်ကိုပေးထား၍ နေမျိုး၏ ကဗျာလက်ရာများအနက်မှ ၅၈ ပုဒ်သာဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရပါသည်။
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်ပါ ၅၈ ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့်
၂။ ဘာသာဗေဒ၏ လှပခြင်း
၃။ လူနှင့်လူ့ဝန်ကျင်းကို မြင်တွေ့ခြင်း
၆။ ကဗျာဆရာ၏ ဖြတ်သန်းရာဘဝကို မြင်တွေ့ရခြင်း စသော အရသာတွေ့မှုများကို စာရေးသူအနေဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် ကဗျာဆရာ၏ အတွေးအခေါ် ဆန်းသစ်ခြင်း၊ ဘာသာစကားအသုံးပြုမှု ဆန်းသစ်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်၊ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ ဆန်းသစ်ခြင်းတို့ကို ထိတွေ့ရရှိပါသည်။ ကဗျာဆရာထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည့် ဆန်း သစ်ခြင်းကို ထိတွေ့သိရှိလိုက်ပါသည်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ မှ ကဗျာများကို ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။ စာရေးသူ၏ သဘောထားနှင့်တိုက်ဆိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ တူညီခြင်း သို့မဟုတ် မတူညီခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုအရာသည် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ ရသတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် ကဗျာဆရာ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခဲ့သော ဝေါဟာရ၊ စကားစု၊ စကားရပ်၊ အနက်နှင့် ဝါကျတို့၏ လှပသော ဘာသာဗေဒအလှအပတို့ကို ထိတွေ့ရရှိပါသည်။ ကဗျာဆရာ ထုတ်ယူရှာဖွေ သုံးစွဲလိုက်သော ဘာသာဗေဒ၏ အလှအပများကို အရသာခံလိုက်ရပါသည်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ မှ စကားလုံးဘူဖေး၊ တောက်တီးတောက်တဲ့၊ ပို့စ်မော်ဒန်ရုပ်ရှင် ၊ ဝါကျဖြစ်သွားသော အက္ခရာများ၊ အစရှိသောကဗျာများကို ဖတ်ရှု၍ စာရေးသူ၏ သဘောထားနှင့်တိုက်ဆိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ပိုနေသည်များကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ လိုနေသည်များကို ဖြည့်စွက်မှတ်သားလိုက်ပါ။ သဘောမတူနိုင်သည်များကို ချရေးကြည့်ပါ။
ထိုအရာသည် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ အရသာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လူနှင့်လူ့ဝန်းကျင်ကို မြင်တွေ့ခြင်း
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် ကဗျာဆရာ မြင်တွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကြောင်းအခြင်း အရာများကို ထိတွေ့ရရှိပါသည်။ ကဗျာဆရာ ထုတ်ဖော်ပြသသရုပ်ဖော်ခဲ့သော လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကြောင်းအရာများကို ကူးလူးထိတွေ့နိုင်ခဲ့ ပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများထဲတွင် ကြောင်၊ ဖားပြုတ်၊ ဝက်သိုးကြီး၊ နွားသိုး၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ကိတ်မုန့်၊ ကုလားထိုင်၊ ဆေးရုံ၊ စေတီ၊ မနက်ပြာ၊ ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်၊ ကဗျာဆရာ ခင်အောင်အေး၊ ကဗျာဆရာ့ဇနီး မဝင်းမေ တို့နှင့်တွေ့ဆုံ ခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ သက်ရှိသက်မဲ့များကို ထိတွေ့ရရှိပြီး ကဗျာဆရာ နေမျိုး၏ လူနှင့်လူ့ဝန်းကျင်အနီးအပါးအကြောင်းများကို ထိတွေ့သိရှိခဲ့ပါသည်။ ကဗျာဆရာထုတ်နုတ်ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများကို စာနာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူ၏ သဘောထားနှင့်တိုက်ဆိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သဘောမတူနိုင်သည်များကို မှတ်သားထားလိုက်ပါ။
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် စာဖတ်သူကို တစ်စုံတရာ ဆုံးမလိုခြင်း၊ သတင်းပေးလိုခြင်း၊ ပညာပေးလိုခြင်းနှင့် အယူဝါဒပြန့်ပွားစေလိုခြင်းတစ်စုံတရာကို မတွေ့ရမမြင်ရပါဘဲ လူ့လောကနှင့်အနီးဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်တည်နေသော သဘောတရားရေးရာများကိုသာ ရိုးရိုးစင်းစင်းဖော်ထုတ် ပြသထားသည်ကို ထိတွေ့ရရှိပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများထဲမှ နီတိများကဗျာ၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကို ထုတ်နုတ်ပြသလိုပါသည်။
နီတိတစ်ခုကို ငါပြောပြမယ်။ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးကို လူနှစ်ယောက်ခွဲဝေစားတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အရသာကို ရလိမ့်မှာလို့
စာဖတ်သူအနေဖြင့် သဘောတူနိုင်၏ မတူနိုင်၏ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သဘောမတူနိုင်သည်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါ။
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် ကဗျာဆရာ၏ ကဗျာအပေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော တနည်း စမ်းသပ်တီထွင်ကြည့် ထားသော ကဗျာလက်ရာများကို ထိတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ထဲတွင် စာရေးသူ၏ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြမှုကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် အဖြေရှာကြည့်ပါ။
တွေ့ရှိချက်များကို မှတ်သားထားပါ။ ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးပါ။ မတူညီသော ကိစ္စရပ်များအတွက် . . .
၆။ ကဗျာဆရာ၏ ဖြတ်သန်းရာဘဝကို မြင်တွေ့ရခြင်း
နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ ကို ဖတ်ရှုရသောကြောင့် ကဗျာဆရာဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဘဝကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ထိုကြောင့် စာရေးသူသည် ကဗျာဆရာ နေမျိုးကို ချစ်ခင်လေးစားရသည်။
ထို့ကြောင့် တကယ့် နေမျိုးဘဝက ကျွန်တော့အမြင်မှာ အေးချမ်းတယ်။ သူ့အနုပညာဟာ သူ့ဟာသူ ဖြစ်တည်နေတယ်။ တမင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူး။ လန်းတယ်။ ဆာလောင်နေသူလို့ မှတ်ချက်ပေးခံရသော နေမျိုး၊ အနုပညာကို ဆာလောင်နေသူပဲ။ သူ့ရဲ့ ဆာလောင်မှုဟာ အေးချမ်းတယ်။ ကိုယ်ထင်တာပေါ့ ဟု လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ရေးသာမိခဲ့သည်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့် နေမျိုး၏ လက်ရွေးစင်ကဗျာများ စာအုပ်ပါ ကဗျာ ၅၈ ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်ပြုကြည့်ပါ။ အကြိုက်တူသူများနှင့်နှီးနှောကြည့်ပါ။ လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ကဗျာဆရာနှင့်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
နေမျိုးကြီး ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီးပြီလား ဟု ကြုံသော ဆုံသောအခါ စာဖတ်သူကို စာရေးသူက မေးကြည့်ပါရစေ လိုပါသည်။
March 28, 2017 in စာပေဆောင်းပါး, စာအုပ်, ဆောင်းပါး.
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံအတွက် အုတ်တစ်ချပ် သို့မဟုတ် ရေစုန်နှင့်ရေဆန်(စာအုပ်)အကြောင်း
← မြန်မာ့ဝတ္ထုတို မဂ္ဂဇင်းများ